သေပြစ်ဟူသည် အဘယ်နည်း - ဖြတ်သန်းခဲ့သော ဘဝပုံရိပ်များ
Home ခရစ်ယာန်အသက်တာ အပြစ် ဩဝါဒ သေပြစ်ဟူသည် အဘယ်နည်း
Samuel Soe lwin 12:40:00 AM ခရစ်ယာန်အသက်တာ, အပြစ်, ဩဝါဒ,
၁ ယော၊ ၅:၁၆ "ညီအစ်ကိုချင်းသည် သေပြစ်မသင့်သောဒုစရိုက်ကို ပြုမိသည်ကို တစုံတယောက်သော သူသည် မြင်လျှင်၊ ထိုသူသည် ဆုတောင်းရမည်။ သေပြစ်ကို မပြုသောသူတို့အဘို့အလိုငှါ၊ ဘုရားသခင်သည် ထိုသူအား အသက်ကိုပေးတော်မူမည်။ သေပြစ်သင့်သောဒုစရိုက်ရှိ၏။ ထိုဒုစရိုက်အပြစ်ကို လွှတ်စေခြင်းငှါ ဆုတောင်း ရမည်ဟုငါမဆို…." ဟူသောကျမ်းပိုဒ်သည် အမေးများဆုံးနှင့် ခက်ခဲသောပုစ္ဆာတစ်ခုအဖြစ်လည်း ထင်ရှားလျက် ရှိပါသည်။ အောက်တွင် ကျမ်းပညာရှင်များစွာ၏ အနက်ဖွင့်ဆိုမှုများစွာရှိသော်လည်း ကျေနပ်နိုင်သည့်အထိ ကျွန်ုပ်တို့မရနိုင်သေးကြောင်း ရိုးသားစွာ ဝန်ခံကြရပါလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့်အားလုံးအတွက် သင့်လျော်သော အဖြေစကားကိုသာ ဖေါ်ပြသွားပါလိမ့်မည်။
၂။ အာနနိနှင့် ရှဖိရေ။
ထိုအတွက် အကောင်းဆုံးသော သာဓကမှာ အာနနိနှင့် ရှဖိရေအကြောင်းသည် အကောင်းဆုံးသော သာဓက ဟူ၍ ဆိုရပေမည်။ ထိုဖြစ်စဉ်ကို တမန်၊ ၅:၁-၁၀ တွင်တွေ့ရသည် (၁ ကော၊ ၁၁:၃၀ ကိုလည်းလေ့လာစေလိုပါ သည်)။ ထို့ကြောင့် "သေပြစ်ထိုက်သောအပြစ်" ဟူသည် စိတ်ဆန္ဒအပြည့်ဖြင့်၊ ဆက်လက်လွန်ကျူးနေခြင်း၊ နောင်တမရ ရှိနိုင်သောအသက်တာကို ဆိုလိုပါသည်။
ဘုရားသခင်သည် ယုံကြည်သူ သားသမီးတို့အား သန့်ရှင်းမှုရှိရန် ခေါ်တော်မူခြင်းဖြစ်ပါသည် (၁ ပေ၊ ၁:၁၆)။ ထို့ ကြောင့်ဘုရားသခင့် သားသမီးတို့သည် အပြစ်ကျူးလွန်မိလျင် အမြဲပင်လျင် "လမ်းပြခြင်း"၊ "သွန်သင် ခြင်း"၊ "မစခြင်း" တို့ကိုအမြဲပြုတော်မူပါသည်။
ထိုသို့ပြုခြင်းမှာ အပြစ်ပြုသောကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးရခြင်း၊ အပြစ်စီရင်ခြင်းမျိုးမဟုတ်မူဘဲ သားသမီး ဖြစ်သောကြောင့် ဆုံးမ၊ ပဲ့ပြင်သွန်သင်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ "ထာဝရဘုရားသည် ချစ်တော်မူသောသူကို ဆုံးမ တော်မူတတ်၏။ လက်ခံတော်မူသမျှသော သားတို့ ကို ဒဏ်ခတ်တော်မူတတ်၏ဟု သူငယ်တို့ကို ဆိုသကဲ့သို့၊ သင်တို့ကို ပြောဆိုသောဩဝါဒစကားကို မေ့လျော့ကြ သလော" (ဟေဗြဲ၊ ၁၂:၆)။
၁ ယော၊ ၅:၁၆ ကိုကြည့်လျင် ဘုရားသခင်သည် အပြစ်တရားတွင် နောင်တမရပဲ ဆက်လက်၍ကျင်လည် လျက်ရှိ နေသောယုံကြည်သူ၊ သားသမီးများအကြောင်းကို ပြောဆိုဆုံးမနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း မြင်တွေ့နားလည် နိုင်ပါသည်။ ထိုအခါတွင် ဘုရားသခင်သည် လည်ပင်းခိုင်မာသောသားသမီးကို ဘေးအန္တရယ်မှ ကင်းဝေး စေခြင်း ငှါ သိမ်းယူ တော်မူခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ကျေးလက်ဒေသများတွင်သော်လည်းကောင်း (သို့) ယနေ့ခေတ်သားသမီးများကို အပြင်တွင်တွေ့ကြုံရင်ဆိုင် နေ ရမည့်ဘေးကိုမြင်၍ သတိပေးသော်လည်း နားမထောင်သည့်အဆုံး သားသမီးအား အပြင်ထွက်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ပြီး အိမ်တွင်းအောင်းခိုင်းစေခြင်းဖြင့် ခိုင်းနှိုင်းလျင်ပို၍သင့်တော်ပါလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် "သေခြင်း" ဟူသည် ရုပ်ခန္ဓာပိုင်းဆိုင်ရာအသက်ဆီမီးစာကုန်ဆုံးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် အသင်း တော်တွင်းဝယ် "နာခံခြင်းမရှိ"၊ "ပုန်ကန်ဆန့်ကျင်"လျက် "အသင်းတော်ကိုရှုတ်ချနေမှု" ကိုအဆုံးတိုင်စေပြီး အသင်းတော်အား သန့်စင်စေပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့်လည်း တမန်တော်ကြီးရှင်ယောဟန်က အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားပြသထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(၁) သေပြစ်ကို မပြုသောသူနှင့်
(၂) သေပြစ်သင့်သောဒုစရိုက်ဟူ၍ .....
၄။ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြုသောအပြစ်။
တမန်၊ ၅:၁-၁၀ နှင့် ၁ ကော၊ ၁၁:၂၈-၃၂ တို့ကိုကြည့်လျင် ရည်ရွယ်ချက်ရှိစွာဖြင့် ပြုလုပ်ကြသောကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ထိုသူတို့အား လောကမှသိမ်းယူတော်မူခဲ့ကြောင်းမြင်တွေ့ရပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့်လည်း ရှင်ပေါလုက ၁ ကော၊ ၅:၅ တွင် " ထိုသူ၏ဝိညာဉ်သည် ယေရှုခရစ်၏နေ့ရက်၌ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်မည် အကြောင်း၊ သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာ ပျက်စီးဘို့ရာ သူ့ကိုစာတန်လက်သို့ အပ်နှံကြစေဟု ငါစီရင်၏" ဟုဆိုထားဟန်ရှိ ပါသည်။
ရှင်ယောဟန်ကလည်း ထိုအတွက်ကြောင့် အပြစ်ပြုသော ယုံကြည်သူ ညီအစ်ကိုများအတွက် ဆုတောင်းလျက် သတိရမှုရှိကြရန် ဆိုထားသော်လည်း ဘုရားသခင်မှ နောင်တမရ၊ အပြစ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့်ပြုသူများအဖို့ ဘုရားသခင်မှ အိမ်တော်သို့ခေါ်ဆောင်မှုပြုသောအချိန်တွင် ထိုသူတို့အတွက် ဆုတောင်းမှုမပြုကြရန် ဆိုထား ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့သော ဆုတောင်းချက်မျိုးသည် မထိရောက်သည်သာမက ဘုရားသခင်အကြံအစည် တော်ကို အဟန့်အတားဖြစ်စေသောကြောင့် မြန်မာစကားပုံအရဆိုရလျင် "အဆိပ်ပင်ရေလောင်း" ဖြစ်သော ကြောင့် မပြု ကြရန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ဘုရားသခင်သည် အချိန်တိုင်းကောင်းမြတ်တော်မူသည့်ဘုရားဖြစ်သည်သာမက ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာအားဖြင့် အသင်းတော်တွင်းဆက်ကပ်အစေခံ၍ သူ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေလိုသည်သာမက လောကီသားများအား လည်း ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်တွင်း ဆက်ကပ်အစေခံခြင်းဖြင့် အပါယ်ငရဲမှ လွတ်မြောက်ရာ အကျွတ်တရား လမ်းသို့ ရောက်ရှိစေလိုပါသည် (၁ တိ၊ ၂:၄)။
"အညစ်အကြေးတင်ခြင်း၊ အရေတွန့်ခြင်းမှ စသည်တို့နှင့် လွတ်လပ်သဖြင့်၊ အသရေတင့်တယ်လျက် ရှိသော အသင်းတော်ကို ခရစ်တော်သည် မိမိအား ဆက်သအံ့သောငှါ၊ နှုတ်ကပတ်တော်ရေ၌ ဆေးကြော ခြင်းအားဖြင့် စင်ကြယ်သန့်ရှင်းစေမည်အကြောင်း၊ ထိုအသင်းတော်အဘို့အလို့ငှါ ကိုယ်ကို ကိုယ်စွန့်တော်မူ၏" (ဧဖက်၊ ၅:၂၇)။
ထို့ကြောင့် အချုပ်ဆိုရလျင် ချစ်တော်မူသောသားကို ဆုံးမတော်မူသည်ဆိုသောစကားအတိုင်း ဆုံးမပဲ့ပြင်၍ မရ သောအခါ၌ အိမ်တော်သို့သွင်းတော်မူခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးချင်းအား "ရည်ရွယ်ချက်ရှိ ရှိဖြင့်ပြုသောအပြစ်"၊ "လည်ပင်းခိုင်မာလျက် ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူများ" အဖြစ်မှ ကင်းဝေး စေအံ့သောငှါ ဘုရားသခင်သည် တစ်ဦးချင်းအား ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်လမ်းပြမှုကို ခံယူနိုင်ကြ ပါစေဟု ဆန္ဒပြုလျက်.....
မှတ်ချက်။ ။ What is the sin unto death? အားမြန်မာမူပြုပါသည်။
Tags # ခရစ်ယာန်အသက်တာ # အပြစ် # ဩဝါဒ
by Samuel Soe lwin - 12:40:00 AM
Tags ခရစ်ယာန်အသက်တာ, အပြစ်, ဩဝါဒ